နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: our new baby lay
our new baby lay
သူ တကယ်က မယုံရဲသော အဖြေတစ်ခု။ ချစ် ဘယ်လိုပြောပြောကိုယ်မယုံဘူးကွာဆိုတော့ ကိုယ့်ကို သူမက စိတ်တွေဆိုးပီးရန်တွေထောင်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ မယုံမရဲအဖြေတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်သေချာ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပီး သကာလ ယေးးးးးးးးး ယေးနဲ့ ထိန်းမရအောင် မျက်ရည်တွေ ကျလို့ ချစ်ကိုဖက်ပီးပျော်လိုက်ရတာ 2015. July. 20 memory.
thanks you for coming new member.
Warmly welcom baby lay.
I want to write about my daughter but no myanmar type.
My princess will become 2years soon.
Posted by နောင်ဂျိန် at 4:04 AM
Don't spend your time.
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အတွေ့အကြုံ သင်တန်းများနှင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း အတွေ့အကြုံ
My reference for cooking
English Songs - The Best English4You
အဂတိလိုက်စားသူ ၄၆ ဦးကို တရားစွဲခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်ပြော
ဦးစိတ်တိုနှင့် မရှပ်တေး တဖြစ်လဲ မစွာတေး တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုပါ။ ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုလဲဟုတ်.. မတည့်အတူနေဆိုလဲဟုတ်.. ခရီးသွားမှတ်တမ်း၊ ဟင်းချက်မှတ်တမ်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသက်သက်ပါ။